Intliziyo ifuna oko ikufunayo ngu-Selena Gomez - Izinto Zobugcisa
Intliziyo ifuna oko ikufunayo ngu-Selena Gomez
Le ngoma ifumana uGomez evula malunga nobudlelwane bakhe kunye no-Justin Bieber. 'Ndicinga ukuba eyona ngxaki inkulu ebendinayo kulo nyaka, nditsho no [Justin], kukuzazisa… bendizama ukuqonda ukuba yintoni le ndiyenzayo. Kwakungokokuqala ukuba ndihlala ndikhatywa, 'uxelele uRyan Seacrest malunga nokujongwa abajongane nako. Ndenze izigqibo ezingezinkulu. Naye ke wenza njalo. Sigqithile kuloo nto ukusenza ngcono kuphela. '
Imvumi uxelele uRyan Seacrest ukuba usikiwe ngobomi bakhe kwaye ividiyo yayo ehamba nayo yamkelwa nguBieber ngokwakhe. Wayecinga ukuba intle. Ndicinga ukuba bekunzima ngenene. Ndicinga ukuba wayenomona omncinci ngale vidiyo ekuqaleni, 'waqhula watsho. Ukunyaniseka, umculo uyimbonakalo, kwaye ukuba uyakuba lelo lizwi kula mantombazana, kukho abantu abathile abaziva ngolu hlobo. Oku jikelele. '
U-Gomez naye wayidlala le ngoma kumhlobo wakhe olungileyo u-Taylor Swift ngaphambi kokuba ayityhile kwihlabathi. Weza ke endlwini, ndayidlala. Wayephethe ii-headphone ngaphakathi, wayijonga ividiyo, emva koko wajonga kum, wajonga ngasemva, emva koko wayidlala amatyeli amathathu ephindaphinda, utshilo. Kwaye ndifana, 'Ndifuna ukwazi,' kwaye wayefana, 'Owu Thixo wam. Oku kuyamangalisa. Ndonwabile kakhulu ngenxa yenu. ''
Ingoma yesihloko libinzana elaqanjwa kuqala nguEmily Dickinson ngo-1862 njengenxalenye yemigca yokuvula yeleta awayibhalela uNkosikazi Mary Bowles. Babhalwa yimbongi baya kumhlobo wakhe kwitheko lokuba uMnu. Bowles kwafuneka emkile kude nenkosikazi yakhe. .
Eli binzana lisondele kakhulu kuWoody Allen ngexesha lodliwanondlebe no-2001 Ixesha malunga nobudlelwane bakhe nentombi kaMia Farrow intombi ka-Kungekudala-Yi. 'Intliziyo ifuna le nto iyifunayo' yayiyingcaciso yomlawuli / yeqonga lokuziphatha kwakhe.
Ividiyo yeemvakalelo yenziwa ifilimu ngaphezulu konyaka ngaphambi kokuba kukhutshwe enye. Ivula ngokurekhodwa kukaGomez onengxaki yokuphazamiseka ngokweemvakalelo malunga nolwalamano lwakhe noBieber, evuma esithi, 'Undenza ndizive ndiphambene, uziva ngathi lityala lam. Ndandisentlungwini. '
'Bacofe i-mic phantsi kwetafile xa bendidlala ividiyo,' utshilo uGomez kuRyan Seacrest. Kwaye ndayidubula le vidiyo kunyaka ophelileyo. Ke, kuloo meko - apho ndandikuloo ndawo ngokweemvakalelo- ndangena ndaya egumbini ndedwa, ndaza ndazijonga kwesona sipili sikwividiyo yomculo, ndaye ndancokola [nam] kum yonke imibuzo Bendinayo engqondweni yam ngalo mzuzu: 'Wowu, le mvakalelo itshintsha yonke into kwaye awunakukunceda.' '
Njengokubetha okuninzi ngeli xesha, igama elikwisihloko liyolulwa xa liculwa kwikwayor. Kule meko, uGomez wenza i-stutter ye-elektroniki, ecula 'Intliziyo ifuna izinto ezi-a-a-a-a-a-a-a-a-ants.' Le yindlela elungileyo yokwenza isibungu sendlebe, njengoko ilizwi liya lingalibaleki ngakumbi. Ezinye iingoma apho unokuva khona obu buchule zibandakanya 'Zishukume' nguTaylor Swift ('Yile nto bangayiboniyo-ee-ee') kunye 'neLips are Movin' kaMeghan Trainor ('Ungandithengela amacici edayimane kunye khanyela iliso ').
Ukusebenza kuka-Selena Gomez wengoma ngexesha lama-Amabhaso oMculo waseMelika ka-2014 wayenamandla kwaye enamandla ngokweemvakalelo. Ukhumbule ukuguqulelwa kwakhe kwiKAMP-FM kaCarson Daly: 'Eli lelona xesha kuphela endakhe ndalicula la ngoma. Ndicinga ukuba yayilixesha ebomini bam apho ndaziva ndihlaselwe esidlangalaleni kakhulu, kwaye bendijongana nezinto ezithile, utshilo uGomez. Ndaziva ngathi lixesha lam kunye nethuba lokunyaniseka okokuqala kwaye ndingenzi ngathi yonke into ilungile kwaye ndiluhlobo lokuyifumana phaya. Kwaye ngoku ndiziva ngathi ndothulwe umthwalo omkhulu. '
U-Gomez akakhange ayenze le ngoma kuhambo lwakhe lokuvuselela ngo-2016. Kufana xa uziva ivumba elibi kwaye likubuyisela kwindawo ekunokwenzeka ukuba ayilunganga, utshilo Ukuzonwabisa ngeveki .
ukuya empuma nasezantsi kulayishwe kunye nelori
xa bendinaye kum amazwi
I-aerosmith ayifuni ukuphoswa yinto yelizwi
Iingoma zokunceda ziibheles
obhale incwadi yothando lyrics
xa ibingeyiyo imini yakho evekini inyanga yakho okanye unyaka wengoma